नेपाली हिरोइनहरुमा गोप्य अंगमा ट्याटु खोप्ने क्रम बढदै ! कस्को ट्याटु कहाँ ?::SamajikPatra
‘स्त न’को तल्लो भागमा ट्याटु खोपेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि अभिनेत्री साम्राज्ञलक्ष्मी शाह केही समय विवादमा तानिएकी थिइन् ।
उनको उक्त तस्बिर ट्याटु कलाकारले सार्वजनिक गरिदिएको भन्दै केही समय सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशित पनि भइन् ।
एक जना कलाकार भन्छन्,‘अभिनयमा लागेका कतिपयले कथाले नमागे पनि ट्याटु खोपेका छन् यो उनीहरुको नीजि मामला हुन सक्छ तर पर्दामा आएपछि, मिडियामा आएपछि चर्चाको विषय बन्नु स्वभाविक हो ।
’५ दशकको उमेरतिर लागेकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले क्लिभेजमा ट्याटु खोपेकी छन् । उनको ट्याटु स्पष्ट देखिने गरेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम होस् वा राजनीतिक नै विभिन्न ठाउँमा जाँदा उनी खुलेको पहिरन लगाउँछिन्, ट्याटु प्रस्ट देखिन्छ ।
क्लिभेज देखाउँदा सुन्दरताको प्रतीक नै देखाएको ठान्ने अभिनेत्रीहरूले जति अंग प्रदर्शनको क्रम बढेको छ, त्यति नै गोप्य ठाउँमा ट्याटु खोप्न थालेका छन् ।
कहिलेकाहीँ यस्तै ट्याटु खोपेको, देखाएकोलगायतका विवादका कारण पनि उनीहरु मिडियामा छाइरहने गरेका छन् ।
‘भाइरल’ तरकारीवालीले गरिन् विवाह ! को हुन् त दुलाहा ?